Tatoazy tohatra: dikany sy fanangonana drafitra | Ny fanaovana tatoazy
Tatoazy tohatra: fanangonana endrika sy dikany
Nat Cerezo | | Tatoazy zavatra sy zavatra
Tohatra. Singa maritrano izay ifandraisantsika isan'andro amin'ny fiainantsika. Fantatsika rehetra fa ny tohatra dia fananganana natao manokana hifandraisana habaka isan-karazany amin'ny haavo isan-karazany. Na izany aza, ny fantatry ny olona vitsy dia azy hevitra sy / na tandindona ao anatin'ny tontolon'ny zavakanto. Ary io tatoazy tohatra io no be mpitia.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hanokana ny tenanay izahay hanazava sy amin'ny antsipiriany ny dikan'ny tatoazy tohatra. Ary koa ny fanangonana karazana endrika isan-karazany ka izay rehetra liana amin'ny fakana tombokavatsa izay ny singa lehibe indrindra dia ny tohatra eo amin'ny vatanao dia manana ny fampahalalana ilaina rehetra mba tena hahafantatra izay tandindon'ireo tatoazy izay mahazatra sy malaza indrindra ireo.
1 Ny dikan'ny tatoazy amin'ny tohatra
1.1 Miakatra amin'ny fahazavana na fidinana any amin'ny helo
1.2 Tohatra misy voninkazo lotus
1.3 Tohatra spiraly
1.4 Tohatra misy famataran'ora
1.6 Tohatra mankaiza
2 Inona no aingam-panahy rehefa misafidy ny endrika
3 Sarin'ny Tatoazy tohatra
Ny dikan'ny tatoazy amin'ny tohatra
Betsaka ny dikany azo atao amin'ny tatoazy tohatra, arakaraka ny fiakarany, fidinana na koa amin'ireo singa narahin'izy ireo. Anisan'ireo tombokavatsa malaza indrindra amin'ity singa maritrano mahaliana hitantsika ity:
Miakatra amin'ny fahazavana na fidinana any amin'ny helo
Ny dikan'ny tatoazy amin'ny tohatra dia, amin'ny heviny lehibe indrindra, ny lalana mivantana mankany amin'ny tontolo ankoatrantsika, na ny ambany na ny ambony. Izany hoe ilaina ny mandeha tohatra hidirana amin'ny lanitra. Raha misy tohatra fiakarana, na, mifanohitra amin'izay, mankany amin'ny helo, amin'ny tohatra fiakarana. Ny zavatra rehetra dia hiankina amin'ny karazana fivavahana atrehantsika.
Izany hoe, ny dikany izay alehan'ny tohatra dia fampahalalana lehibe ihany koa hahafantarana ny dikan'ity tatoazy manokana ity. Araka izany, ireo tohatra miakatra, miharihary, dia nampifandraisina amin'ny fandrosoana, ny tanjona farany (na ny lanitra, araka ny efa nolazainay teo aloha), izay matetika no tandindon'ny faran'ny tohatra, izay azo afangaro amin'ny zavona manjelanjelatra, toy ny hoe lanitra, na mety misy vavahady mitarika fahazoana fahazavana vaovao manokana, ohatra.
Amin'ny lafiny iray, ny tohatra midina dia maneho fidinana any amin'ny helo ary ampiasaina izy ireo, ambonin'izany rehetra izany, hahatadidy ireo fotoana lasa izay nidirantsika tao anaty toe-javatra sarotra ary toa tsy nisy lalan-kivoahana. Ny tatoazy dia afaka manome taratra an'io fidinana io, ohatra, amin'ny tohatra mihena rehefa midina na miaraka amin'ny tohatra miolikolika, izay horesahintsika etsy ambany, mariky ny zava-miafina sy hadalana, ankoatry ny hafa.
Tohatra misy voninkazo lotus
Fitaovana koa izy io ary fitaovana fampitana hevitra amin'ny tsy fantatra sy ny ara-panahyIzany no antony mahazatra ny mahita azy ireo atambatra amin'ny voninkazo lotus sy singa hafa amin'ny loko bodista. Amin'izay dia ny tohatra no lalana mitarika antsika amin'ny fahazavana, amin'ny fahalalana ny tena (izay tena tandindon'ireny voninkazo tsara tarehy ireny).
Tokony hifantoka manokana amin'ny tohatra miolakolaka na miolikolika koa isika.satria heverina ho mariky ny mistery izy ireo. Ny seho an-tsarimihetsika angano sasany dia atao eo amin'ny tohatra misy an'io toetra io, ohatra, ampiasaina hanehoana ny tahotra ny haavo iainan'ny mpihetsiketsika an'i Fanina, nataon'i Hitchcock, izay misy ilay tadiny, izany hoe ny endrik'ilay tohatra miolikolika, dia mitana andraikitra lehibe koa.
Ny tadiny kosa, mariky ny fanovana tsy mitsahatra izy ireo, ny fahafatesana sy ny fitsanganana amin'ny maty, fa koa ny hadalana amin'ny asa maro.
Tohatra misy famataran'ora
Izy ireo dia iray amin'ny tombokavatsa tohatra malaza sy malaza indrindra, satria mitoetra ao amin'ny fianakaviana ny tandindony. Matetika izy ireo dia misolo tena na fianakaviana iray manontolo, mpivady, zaza ... ary mariky ny fotoana laniana miaraka izy ireo, fa koa ny fivoaran'ny tena manokana sy iraisan'ny tsirairay amin'izy ireo, noho izany antony izany, ny tohatra, izay mandray an'io dikany io dia miakatra foana fa tsy midina.
Ny tohatra dia azo raisina ho zanak'olo-mpiray tamina tohatra mandritra ny androm-piainany. Tahaka ireo izay mifamatotra amin'ny fifangaroan-kevitra mifono mistika sy avo lenta, satria araka ny efa nolazainay fa samy làlana mankany an-danitra na amin'ny fahazavana ary any amin'ny helo, ny tohatra dia manana dikany prosaic kokoa. Mariky ny hahatratrarana tanjona izy ireo, saingy ho tsotra io tanjona io, ary tsy ho dia lavitra ara-panahy izany. Mifanohitra amin'izany, ny tohatra dia azo raisina ho fanerena kely izay ilainao amin'ny fotoana nomena mba hahatratrarana izay kasainao hatao.
Ny tohatra mankaiza, toy ny tohatra miolikolika, mariky ny mistery, nefa izy ireo koa dia afaka maneho ny fisavoritahana na ny fomba fijery maneso ny fiainana aza., satria ny tohatra antenaina hitarika any ho any, hanana toeran-kaleha. Ny tatoazy tohatra izay tsy mitarika na aiza na aiza dia mampiseho taratra izany fahatsapana izany rehefa mahatsapa isika fa tsy anisan'ny zavatra hafa, ary ny fiainana dia tsy misy dikany na mitarika na aiza na aiza.
indrindra ny fahasoavan'ny tatoazy dia ny misambotra marika mifandraika amin'ny fivavahana, toy ny tohatra mankany an-danitra, ary ahodino izany mba hanana dikany hafa tanteraka.
Inona no aingam-panahy rehefa misafidy ny endrika
Araka ny hitantsika nandritra ny lahatsoratra, na dia maro sy samy hafa aza ny dikan'ny tatoazy amin'ny tohatra, dia manana fiaviana iraisana izy rehetra: ny ara-panahy sy mystika. Izany no antony tsy fanaovana tatoazy izay fanaon'ny olona atao amin'ny loko. Ny mainty sy fotsy dia manome azy io mikasika ny transcendence sy ny mistery, mety indrindra hampifandraisina amin'ny hevitry ny tatoazy, matetika amin'ny fomba tena izy sy ny tsipika tsara, ary misy habe manan-danja, indrindra raha miaraka amin'ireo singa hafa izy io.
Na izany aza, Ny tatoazy amin'ny tohatra tsotra dia lasa mahazatra kokoa, satria mety ho mistery koa izy ireo. Miaraka amin'ny tsipika tena tsara sy lehibe kokoa noho ny teo aloha, ireo tombokavatsa ireo dia mitazona ny mainty sy fotsy, saingy mirona izy ireo miaraka amin'ny singa prosaic sy surreal kokoa, toy ny varavarana, planeta ...
Amin'ny lafiny iray, Ny endrika hafa tanteraka dia mahazatra amin'ny tatoazy tohatra. Amin'ireny, ny tsipika matevina dia mazàna ampiasaina bebe kokoa, ary ny loko dia tsy mahazatra loatra. Raha ny marina, ny endrika dia milay indrindra amin'ny fomba nentim-paharazana hanomezana azy tsy mahazatra.
Ao amin'ny galeran'ny tombokavatsa tohatra izay miaraka amin'ity lahatsoratra ity dia azonao atao ny mijery karazana endrika isan-karazany, na tohatra mahazatra na tohatra miolika na spiral. Araka ny hitanao izao, misy olona maro izay miloka amin'ny fanahafana tohatra iray izay varavarana fidirana mankany ankoatra.
Manantena izahay fa nanome aingam-panahy anao izahay miaraka amin'ity dikany farany ity. Lazao aminay, manana tombokavatsa amin'ity fomba ity ve ianao? Mampiseho inona izany ho anao? Nisafidy escola realista ve ianao, tohatra misy famolavolana nentin-drazana sa, mifanohitra amin'izay, zavatra tsy manam-paharoa sy tena izy?
Sarin'ny Tatoazy tohatra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Karazana tombokavatsa » Tatoazy zavatra sy zavatra » Tatoazy tohatra: fanangonana endrika sy dikany
Tatoazy volana: ny dikany sy ny endriny rehetra
Ny fihenan-danja lehibe dia misy fiantraikany amin'ny tatoazy: Mampiseho ireo sary ireo